问题： Mandra-pahoviana no mety hitànan'ny orinasa mpanantona ny
Mandra-pahoviana no mety hitànan'ny orinasa mpanantona ny fiaranao?
Any amin'ny fanjakana sasany, ny orinasa mpanantona dia mety handray andraikitra hamidy fiara mihantona nefa tsy miditra amin'ny fitsarana.
Amin'ny ankapobeny dia mitaky ilay orinasa manantona na biraon'ny kianjan'ny distrika mihazona ilay fiara mandritra ny 10 na 14 andro mandritra ny ahafantaran'izy ireo sy mifandraika amin'ny tompon'ny fiara na ny tompona lien.
前一个问题Mividy fiara antitra ve ny CarMax?
下一个问题Inona no ataoko raha miakatra ny fiara ko?
Mandra-pahoviana no mety ny seza seza Graco?
Ao amin'ny seza misy ny fiara Graco, izany no fantarina ao amin'ny seza misy fiara: "Aza ampiasaina aorian'ny 20xx desambra" (ity fampahalalana ity dia mamolavola amin'ny seza ary ny datin'ny fananganana marika dia eo amin'ny farany na amin'ny lamosin'ny seza— ny daty lany andro dia matetika ka h...
Mandra-pahoviana no hitazomana ny fakantsary?
Ny angon-drakitra amin'ny fakantsary vatana dia tsy maintsy tehirizina tsara sy fiarovana. Hizara miaraka amin'ny ID-pirenen'izy ireo sy ny ID ID misy azy ireo ny video, raki-tsary. Ny fakana sary mihetsika dia hotazonina araka ny lalàna eo an-toerana manomboka amin'ny 15 andro ka hatramin'ny 1 t...
Mandra-pahoviana no avelanao hipetraka ny fiara alohan'ny fiara?
Avelao hijanona kely mandritra ny dimy minitra izy alohan'ny hanilihanao.
Mandra-pahoviana ny milina fanosotra anatiny?
Raha mikarakara tsara azy ireo ianao, toy ny tompona fiara mahazatra, dia mety haharitra am-polony taona maro izy ireo. Fa tokony ho EXTREMELY voatokana ho hitazonana ny masinina ianao. Mety ho be dia be ny fanoloana azy nefa avy eo dia hitazona ny taloha ihany. Na izany aza tsy maintsy ataonao d...
Mandra-pahoviana vao ho tonga ny taratasiko?
Fotoam-panaterana Ny tatitra momba ny paositra amerikanina (USPS) dia nitatitra fa tamin'ny Janoary 2018, mitana ny iray ka hatramin'ny telo andro eo ho eo amin'ny fahatongavan'ilay Mail-Class Voalohany eo amin'ny toerana alehany. Maka laharana iray na telo andro koa ny laharam-pahamehana.
Mandra-pahoviana no avelanao ho mangatsiatsiaka ny motera alohan'ny famoahana menaka?
Ity misy tendron'ny fanamafisana ny fiovan'ny solika - raha mangatsiaka ny motera, dia atsipazo ary avelao mandritra ny 2-3 minitra. Hahazo hafanana hatrany amin'ny 100 degre ny menaka, izay tsy mafana ny may mba handoro anao, fa mafana kosa dia handroso mora foana. Raha efa naterina ny fiara, av...
Mandra-pahoviana no avelako halamina ny bateria mba hamerenana ny ECU?
Tena mety ilay izy, fa raha hitanao sy hidina ilay izy, avelao hofoanana mandritra ny 30 segondra. Ny zavatra tsara momba an'io fomba io amin'ny fomba "hampihemotra ny tariby ratsy" dia ny tsy tokony hamerenanao ny radioo! Raha tsy hitanao ilay izy, dia manaova tariby ratsy - aorian'ny 30 segondra.
Mandra-pahoviana aho no handeha tsy misy fiovana solika?
Ny ankamaroan'ny fotoana raha manam-pileferana an'io ianao dia afaka mandeha 5000 ka hatramin'ny 6000 kilaometatra noho ny fiovan'ny mileage. Raha ny marina, arakaraka ny taonan'ny fiaran'ny fiara-nao dia mety ho mihoatra ny 7000 ka hatramin'ny 10.000 kilaometatra no mety hataonao. Raha ny teoria...
Mandra-pahoviana no misy fiara matanjaka Graco SnugRide 30?
Iray amin'ireo seza amin'ny zaza zazalahy ao Graco, ny SnugRide Click Connect 30, dia manana daty lany daty 7 taona taorian'ny daty nanamboarana azy, tahaka ny fipetrahan'ny fiara miova fo, ny My Ride 65. Ny seza fiara 4Ever 4-in-1, na izany aza, dia manana daty lany daty 10 taona aorian'ny fanam...
Mety hamindra ny fiara va ny orinasa mampihetsi-po?
Ny valiny fohy dia eny… Amin'ny toe-java-misy sasany, hisy orinasa mampihetsi-po vitsivitsy handefa ny fiaranao sy ny fanaka miaraka aminao. Mihevitra fa ny orinasa dia manana fitaovana sy fahaiza-manao mety amin'ny fandefasana fiara, na vonona ny hanao izany izy ireo dia misy antony 2: vidiny sy...
Mandra-pahoviana no hiondrana amin'ny sambo mankany Long Island?
Ny dia eo amin'ny 55 minitra eo ho eo.
Afaka manantitrantitra ny fiantohana amin'ny fiaranao raha nivarotra trosa ny orinasa?
nandritra ny folo taona mahery aho no nandrafitra fiara, ary eny izy ireo dia mividy ny zo miaraka amin'ny trosa
Mandra-pahoviana no handeha fiara mandehandeha 35 mph raha tonga amin'ny fijanonana iray manontolo?
izany dia miankina amin'ny, inona ny zanaky ny fiara. inona ireo conditons mitondra fiara. Fijanonana azo antoka na famotehana ireo brakes miaraka amin'ny vavanao rehetra. Inona ny karazana frezy, rotors, firy taona izy ireo? Eo amin'ny fanadinana sekoly fitiliana = 210ft
Mandra-pahoviana no fijanonan'ny tapakila mandeha haingana eo amin'ny firaketana mitondra fiara any Michigan?
Fotoam-potoana Ny tapakila rehetra raisinao any Michigan dia hijanona ao amin'ny firaketanao mandritra ny roa taona manomboka amin'ny daty fandresen-dahatrao. Raha mandoa ny tapakila ianao dia roa taona ity hatramin'ny nanakaranao. Raha miady amin'ny tapakila ianao, roa taona manomboka amin'ny na...
Mandra-pahoviana ianao no afaka mitondra fiara any Angletera amin'ny fahazoan-dàlana vahiny?
Tompon'ny pasipaoro eropeana eropeana: Tsy misy fizahana famantaranandro britanika hatao. Afaka mitondra fiara ao amin'ny fahazoan-dàlana avy any ivelany ianao mandra-pahatratranao 70 taona. (Raha 67 taona na mihoatra ianao rehefa lasa mponina, dia afaka mitondra ny fahazoan-dàlana EU mandritra n...
Orinasa inona no manao ny milina Kia?
Hyundai / KIA dia manana motera motera iray any Montgomery Alabama tokony ho 100 kilaometatra avaratra amiko. Rehefa tsaroako ny motera 2,4 litatra dia vokatry ny "Engine Global" Namboarina ho ezaka ezaka / fiaraha-miasa ataon'ny DaimlerChrysler, Mitsubishi Motors, ary orinasa Hyundai / KIA Motor...
Inona no ataonao rehefa mihodina ny fiaranao?
Mba hialana amin'ny kodiarana misy kodiarana aloha, esory aloha ny tongotrao amin'ny pedal ary ny accelerator. Avereno ho lasa zotra mahitsy ilay kodiarana manampy ilay kodiarana ho tratran'ny traction ary ampidino moramora ilay brake (aza avereno indray ilay làlan-tongotra) mba hampijanonana ila...
Mandra-pahoviana ianao no afaka mitondra fiara amin'ny milina lava be?
Mihazakazaka mivezivezy fohy kokoa Isaky ny mihamafana ny motera dia esory ary omeo 10 na 20 minitra farafahakeliny. Na dia tsy fomba fiasa tsara ho an'ny milina be loatra aza izany, dia tsara kokoa noho ny mitondra fiara miaraka amin'ny maotera be loatra, ary mety miteraka fihenan-javatra tanter...
Mandra-pahoviana ianao no afaka miasa ara-dalàna tsy misy fiatoana?
Amin'ny ankapobeny, ianao dia manana fiatoana 15 minitra rehefa niasa nandritra ny adiny 4 ora. Raha miasa mihoatra ny 6 ora ianao dia mendrika fitsaharana 30 minitra, izay mety hampiditra ny fiatoana 15 minitra voalohany. Tsy misy tambiny karama amin'ireto fiatoana ireto ary tsy heverina ho foto...
Mandra-pahoviana ianao no afaka mitondra fiara nefa tsy misy menaka?
Raha tsy misy solika dia mihazakazaka mandritra ny 15 minitra ilay masinina tsy mijanona amin'ny setroky ny setroky ny setroka, fa ny misintona azy dia manambara fahavoazana lehibe tokoa. Ny tsy fahampian'ny fitrandrahana mety, ny singa rehetra amin'ny metaly ao anaty motera manohitra ny tsiraira...
Ahoana no fomba anombanan'ny orinasa fiantohana ny fahavoazana ny fiara?
Mba handoavana ny fahavoazanao, ny orinasa fiantohana dia tsy maintsy manao tombatombana amin'ny fiaranao. Indray mandeha dia matetika ny fahazoana tombatombana maro ao amin'ny fivarotam-batana ary ny fanomezana izany amin'ny orinasanao amin'ny fiantohana. Ny orinasam-piantohana avy eo dia hameri...
Inona no ataon ny fiantohana rehefa nangalatra ny fiaranao?
Ny fandrakofana novidinao tamina orinasa fiantohana dia mamaritra raha ho voasarona ianao raha misy ny halatra. Raha lasa nangalatra ny fiaranao, dia tsy hanarona anao ny orinasan'ny fiantohana raha toa ka manana rakotra tompon'andraikitra ianao. Raha hita fa simba ny fiara dia ho voaloa ny vidin...
Inona no ataonao rehefa mihazakazaka ny fiaranao?
Raha mafana ny motanao, manaova ity mba hampangatsiahana azy: Tapaho ny mari-pana rivotra. Ny fametrahana ny A / C dia mametraka enta-mavesatra amin'ny maotera. Aviho ny mpandeha. Manapoaka hafanana be loatra avy amin'ny masinina ao anaty fiara izany. Apetaho amin'ny neutre na zaridaina ny...
Inona no mety hampidi-doza ny fiara?
mandoto ny tany ny fiara
Firy kilaometatra no mety haharitra ny kamiao?
Ireo no fiara sy kamiao tena azo inoana ary hatramin'ny 200.000 Miles farany. Inona no mamaritra raha afaka mividy fiara ianao ary manohy azy io amin'ny 200000 kilaometatra? Ny lakile lehibe iray dia ny fikolokoloana tsy tapaka sy mahatoky ho an'ny tompony.
Ohatrinona no mety hanolo ny camshaft?
Fantaro hoe inona ny vidin-tsoa tokony horaisinao mba hahametranao ny fiaranao. Eo ho eo amin'ny $ 176 sy $ 255 ny salan'isa satroka ho an'ny fanoloana mpibebaka ho an'ny camshaft. Tombanana eo anelanelan'ny $ 74 sy $ 95 ny vidin'ny mpiasa raha ny vidiny kosa eo anelanelan'ny $ 102 sy $ 160. Tomb...
Hafiriana no mety hangatsiaka ny motera?
Rehefa mijanona ny motera ianao dia mafana ny motera e. Mila fotoana maharitra tokoa ny singa anatiny ao amin'ny masinina ho tony. Afaka hatramin'ny 8 na 12 ora izany.
Ohatrinona no mety hanolo ny sensor sensor?
Fanoloana VSS Ny vidin'ny DIY hisolo ny sensor an'ny hafainganam-pandeha dia ny vidin'ny sensor. Miankina amin'ny herin'ny fiara, manaova sy modely, ny vidin'ny haingam-pandeha haingana dia mety ho $ 7,92 na $ 100 $. Ho an'ny ankamaroan'ny fiara, ny vidiny ho an'ny sensor haingana dia eo anelanel...
Inona no antony mahatonga ny orinasa hampitombo ny famokarana raha miakatra ny vidin'ny vidiny na serivisy?
Ny fiakaran'ny vidin'entana amin'ny famokarana, ny fandrosoana amin'ny haitao, ary ny fitarihan'ny governemanta (famatsiana ara-bola, hetra, ary ny fitsipika) dia mety hisy fiantraikany amin'ny làlaka famatsiana. Maninona ny orinasa no mampitombo ny famokarana rehefa miakatra ny vidin'ny tsara?
Inona no azonao atao raha handeha repo ny fiaranao?
Aloa ara-potoana ny fandoavanao, na hahazo fiara mora kokoa
Inona no hataonao raha matin'ny ririnina ny fiaranao?
4 zavatra tokony hatao rehefa overhite ny fiaran-kafatra amin'ny ririnina manaraka, dia tokony hampivily ilay fiara ianao mba hanomezan'ny rivotra ny fotoana ny motera. Sokafy amim-pitandremana ny fonontinao mba hivoahan'ny hafanana. Raha avy amin'ny satroka radiatera ny setroka, dia mitandrema b...
Ohatrinona no mety hanamboarana ny 4l60e?
Vidin'ny fananana fivarotana aorina ny 4L60E Raha mikasa ny hanangana azy ny fivarotana ianao dia manintona ary mitondra ny fandefasana azy ireo, azo atao hoe $ 1000 na ambany. Tsy betsaka anefa izany. Raha manana fivarotana fivarotana ianao, manaova ary mamerina indray ny fifindrana dia mety miv...
Inona no ataonao rehefa mihodina amin'ny ranomandry ny fiaranao?
Ampandehano amin'ny làlan-jotra mitovy ny kodiaranao eo alohan'ny fielezan'ny fiara. Henonao koa ny momba ny "nitodika tany". Samy midika zavatra mitovy ireo rehetra ireo. Ohatra, raha mitodika any ankavanana ny lamosin'ny fiaranao, ampodio ny volanao.
Inona no tokony hilatsaka raha tsy lany menaka ny fiaranao?
Raha toa ka tsy mandany solika ny fiarao, dia matahotra mafy aho satria raha tsy mitondra solika ny fiara ao aminao dia haka ny motera anao. Raha manova ny solika ianao dia mila menaka vaovao dia mihosokosoko menaka vaovao amin'ny tombo-kase an'ny sivana vaovao mba tsy hihenan'ny fiara anao. Atao...
Fa maninona no mivadika ny fiaranao rehefa tratranao ny banga na mandeha mihoatra ny 40mph?
maherin'ny 40mph .. na kodiarana ratsy na mila mahay mandanjalanja ary mety milamina .. ny hafainganam-pandeha mety hitondrana anao. mba hahamarina ny fahatafintohanao manindry mafy eo anoloana ary raha miondrika miakatra intelo izy avy eo .. lol maniry anao hahazo vaovao ianao .. mitovy amin'ny ...
Inona no mitranga rehefa mivadika any Indiana ny fiaranao?
Any Indiana, rehefa tsy miserana ny fandoavana ny fiara, dia mamela ny mpampindram-bola amin'ny trosa ny famerenam-bola ny fiara. Midika izany fa raha tsy amin'ny alàlan'ny mpampindram-bola dia afaka mandeha fotsiny ary maka fiara avy amina làlana tsy misy fahazoan-dàlana. Vantany vao naverina ny...
Inona no fomba tsara indrindra hitazomana ny fiaranao?
Ireto misy dingana 7 mora amin'ny fiara lava mitaingina hatokisana anao. Ataovy tsara ny kodiaranao. Mora ny mandray ireo kodiarana ireo. Manova ny menaka ary diniho ny tsiranoka. Izahao ny jiro. Manolo ireo mpanototra rivotra. Hamarino ny sivaninao. Omeo indray mandeha ireo singa ...
Inona no mitranga raha tsy misoratra ara-potoana ny fiaranao?
Ny fizotry ny fisoratana anarana amin'ny fiara dia misy ny fampahalalana momba ny fiara sy ny antsipirihany momba ny fiaranao ary mandoa ny sarany fisoratana anarana. Raha tsy mahavita manoratra ny fiaranao ianao na manavao ny fisoratana anarana, dia mety hiatrika ny saram-panasaziana, tapakila a...
Inona no hataonao raha misy olona manipy ny fiaranao?
Fomba 1 manadio vazy vaovao Raiso na inona na inona olana. Tsofy ny vava mba hanala ny hamandoana be loatra. Afafazo ny sosona matevina misy lovia kely eo amin'ilay faritra manadiovanao. Mamorona vahaolana fanadiovana rano. Sorohy ny tasy. Aforeto amin'ny rano madio ny faritra. ...
Ohatrinona no mety hanolo ny cylinder ho an'ny mpanompo?
Eo ho eo amin'ny $ 220 ka $ 267 ny salan'isa satroka ho an'ny fanoloana cylinder andevo. Tombanana eo anelanelan'ny $ 105 sy $ 134 ny vidin'ny asa raha ny vidiny kosa eo anelanelan'ny $ 115 sy $ 133 $.
Ohatrinona no mety handoavana ny harafesina amin'ny fiara?
Ny fitaovana ho an'ny iray amin'ireto asa ireto dia mety ho $ 50 ka hatramin'ny $ 75, ary 60 tapitrisa ka hatramin'ny $ 100 kosa ny asa. Ny fanamboarana lehibe dia azo fantarina amin'ny alàlan'ny harafesina lehibe kokoa noho ny savaivony 12cm. Mety ho lasa lalina indrindra izy ireo; Amin'ny toe-j...
Inona no dikan'izany rehefa tsy mety ny fiainanao solika?
Ny kilaometatra ratsy dia midika fa ny lalanao no nandalo ny toerana takian'ny fikojakojana. Raiso avy hatrany ny fikojakojana ny nataon'ny mpivarotra anao. Raha 0 isanjaton'ny fiainana ny solika solika sisa dia hitsinkafona ny fiainana ny solika. Tonga ny fampisehoana isaky ny mamily ny fidirana...
Ahoana no ahafantaranao ny lafin'ny bateria mety tsara?
Ny bateria tsirairay dia misy sisiny metaly roa. Ny iray dia voamarina tsara (+), ny iray hafa ratsy (-). Misy ihany koa ny tariby miabo sy miiba ao amin'ny tariby jumper. Ny mena kosa no miabo (+), ny mainty no ratsy (-).
Iza no mety ho tratry ny rivotra na herinaratra?
Ny herinaratra dia midika fitahirizam-bidy amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody dia mahazo tombony noho ny herin'ny rivotra manempotra afaka manome valiny mahery vaika noho ny herinaratra. Rehefa miantehitra amin'ny herinaratra tsy misy herinaratra ianao - famahanana herinaratra azo avy amin'ny bat...
Ahoana ny nahazoan'ny orinasa fiara ny anarany?
Ny orinasa izay fantatsika izao rehefa nanomboka ny taona 1914 i Nissan ho DAT Motorcar. Ny anarana "DAT" dia avy amin'ny voalohany voalohan'ny anaran'ny fianakaviana telo mpanorina.
Inona no mety hahatonga ny mpandahateny hijanona tsy hiasa?
Raha tonga ny rafitra fanamafisam-peo nefa tsy misy feo maneno avy amin'ireo mpandahateny anao dia mety ho mpamono ny lozinao na ny mpampandahateny anao. Raha toa ka voapoaka ny fangon'ny amplifier dia mitadiava fomba hanoloana azy satria mety hahatonga ny mpandahateny anao tsy hijanona intsony. ...
Ohatrinona no mety hanolo ny bika tsy fangaro?
Eo ho eo amin'ny $ 231 sy $ 331 ny salan-javam-bidin'ny fanoloana coil coation. Ny vidin'ny asa dia tombanana eo anelanelan'ny $ 59 sy $ 75 ary ny vidiny kosa eo anelanelan'ny $ 172 sy $ 256. Tombanana tsy misy hetra sy haba ny tombany.
Hafiriana no mety hahazo fahazoana manamarina ny fampandehanana fitaovana mavesatra?
Safidy fanofanana Ny mpianatra mitady ho lasa mpandraharaha mavesatra dia afaka mampihatra amin'ny programa fanamarinana, matetika atolotry ny oniversite na ny sekoly ara-barotra. Mandritra ny valo herinandro ny programa dia vita.
Mila résonator ve ny fiaranao?
Ny asan'ny Resonator Fananganana iray ampidirina ao anatin'ny rafitry ny fiara sy ny kapoaky ny kamiao anao no tanjona iray lehibe - hamelona azy io. Karazana efitrano fanaovana echo ho an'ny fivoaran'ny fiara misy anao izany, manomana ny feo mafy rehetra avy any amin'ny masininao mba hangina ny ...
Misy orinasa mividy ve ny Enterprise?
Mitadiava ny tolotra tsara indrindra anio amin'ny fiara, kamio, vano ary SUV amidy. Ny Enterprise Car Sales dia manolotra fihenam-bidy tsy misy dikany, izay manamora ny fividianana fiara efa zatra. Ny fiara rehetra efa nampiasaina dia Enterprise Certified. Ireo fiara nampiasaina amidy amin'ny mpi...
Inona no mety hahatonga ny fiara ho toy ny eo amin'ny lemaka rehefa tsy izany?
Mety ho efa misaraka ianao. Ny sosona ivelany miaraka amin'ny modely an-tongotra dia misaraka amin'ny fotony. Olana lehibe io, mila misolo ny kodiarana ianao.
Inona no mitranga raha nangalatra ny fiaranao ary manana rakotra feno ianao?
Raha manana fiantohana feno ianao, midika hoe fandrakofana feno sy fifandonana, ny orinasanao fiantohana dia mitari-dalana anao mandritra ny fandehanana rehefa avy nametraka tatitra fiara nangalatra tamin'ny polisy ianao. Ny fiantohana feno dia miverina aminao amin'ny halatra fiara.
Misy ve ny orinasa VOHITRA fiara izay manomboka amin'ny Q?
Misy ny orinasa Q-Car; na ny fiara E-Quickie, naorin'ireo mpianatra tao amin'ny Karlsruhe University of Applied Science in Germany. Jereo ny rohy eto ambany.
Ahoana ny fomba entin'ny fiara sy ny orinasa enti-manondrotra?
Ny ankamaroan'ny dia avy amin'ny fandrehitra solika fôsily amin'ny fiara, tranobe, orinasa, ary angovo herinaratra. Ny entona tompon'andraikitra amin'ny hafanana indrindra dia ny dioksida karbonika, na ny CO2.
Afaka mihazona ny fiaranao ve ny tompon-dàlana faha-2?
ENY raha tsy mandoa zanabola ianao dia afaka mamerina izany mandra-pahafeno ny fepetra takiny
Inona no tokony ataonao mba hifehezana ny hafainganam-pandehan'ny fiara-nao?
Mba hifehezana ny hafainganam-pandehanao dia tokony; A) Misafidiana fitaovam-piadiana avo lenta ary ampiasao tsara ny brakes. C) Misafidiana fitaovam-piadiana avo lenta ary ampiasao mafy tsara ny prakes. D) Misafidiana fitaovam-pandeha ambany ary aza atao ny mampiasa brakes.
Inona no mahatonga ny tabataba rattle avy amin'ny masinanao rehefa manosika ny mpandeha amin'ny gazy ianao ao anaty fiaranao?
TOO HANOTRA NY OCTANE.TRY 89 RAHA TSY MBOLA MITADIAVAINA NY 91 NA 93 OCTANE. HO HITANAO NY INDRINDRA AN'ANDRIAMANITRA HO AN'ANDRIAMANITRA.
Inona no tokony hataonao raha manomboka mitsambikina amin'ny lalana malama ny fiaranao?
Fahazavana: Raha kodiarana iray no mipoaka, tohizo kodiarana ny kodiarana ary ajanony ny tongotrao tsy hihoatra ny alalàn'ny entona. Raha tsy milamina ny fiaranao, dia tanteraho tahaka ny ranomandry na ranomandry. Aza mampiasa ny kapoinao raha tsy voafehin'ny fiaranao.
Rehefa manomboka mivily ny fiaranao dia tokony?
Raha fintinina, rehefa manomboka milomano ianao amin'ny fiara: Esory ny tongotrao hamehezana ny pretra sy ny tapaka. Mihoatra moramora amin'ny lalana tianao halehan'ny fiara. Rehefa manomboka mahazo indray ny fifehezana ny fiara ianao dia ampiharo moramora ny remant (mieritreritra fa manana anti-...
Mety hanimba ny fiara va ny kodiarana?
Tonga ny olana rehefa tsy mitodika ny kodiarana ary tsapanao ho mora mandoko izany. Midika izany fa manaitra ny fifindranao ianao, izay hanimba azy. Rehefa mampitombo ny fampandehanana ny fiara ny mpanamory dia hampihemotra foana na hadalana ny fifehezan'ny traction (raha anjaranao ny fiara) mba ...
Inona no hitranga raha mitondra ny fiaranao manakaiky ny hafainganam-pandehan'ny jiro ianao ary nitodika ireo lohan-jiro?
Raha mitondra fiara ianao manakaiky ny hafainganam-pandehan'ny hazavana mifanakaiky amin'ny tany (manao tsinontsinona ny vokatry ny rivotra) ary mitodika ny lohan-jiro, hamela ny jironao amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny hafainganam-pandeha araka ny fanaony foana. Ho anao amin'ny fiara mihetsik...
Firy kilaometatra talohan'ny nivarotanao ny fiaranao?
Satria ny fanavakavahana dia tsy tapaka, tsara kokoa ny mivarotra na manakalo amin'ny lozinao alohan'ny hahavoa ny marika 100000 kilometatra. Amin'izao fotoana izao, tsy ho be ny hahazoanao an'io satria ny mpivarotra dia mazàna mahita ireo fiara ireo fa mpivarotra ihany no amidy amidy.
Misy fiantraikany amin'ny firaketanao ve ny fampandehanana ny fiaranao?
Nivadika ny fiara kodiaranao ary mila andriamby ianao. Raha mandoa ny halavanao ianao, dia mety tsy hampandrenesina ny orinasam-piantohana fa manana olana ny fiaranao. Valiny farany: ny fanararaotana fanampiana eny an-dàlambe, na ny fampiasana azy matetika matetika, dia mety hisy fiantraikany ami...
Fa maninona no mihodina mankany ankavanana ny fiaranao rehefa mivadika ianao?
Raha mieritreritra ianao fa manana brakes disc, dia mety ho, kapoaka fametahana na kapoka mafy eo amin'ny sisiny havia. Matsiro na ranon-tsolika amin'ny sisiny amin'ny sisiny havia havia. Fametrahana hosoka / tsipika ferana amin'ny sisina havia havia. Rivotra ao amin'ny tsipika hidrolika amin'ny...
Inona no dikan'ny hoe rehefa manomboka ny fiaranao fa mandeha fiara?
Matetika izany dia mariky ny tsiranoka mikoriana ambany na solon-tena fanaraha-maso diso. Araka ny fantatrao, ny fifindrana mandeha ho azy dia mampiasa tsiranoka hidradrano mihetsika mba hanovana fiovam-po. Rehefa diso izany na tsy mandeha tsara, dia mety hiteraka fanemorana ny fiovan'ny fitaovam...
Mety ve ny mandanjalanja ny mpanjifa marina?
Zo amin'ny fanavotana mety
Azonao atao ny manala ny fitaovana momba ny orinasa amin'ny fiara raha vao miverina izy io?
Izany no toe-javatra mampihetsi-po. Azo atao ny (miankina amin'ny mpamatsy vola.) Dia handoa vola ihany ianao. Raha mandroba ny ampahany amin'ny fiara ianao dia kely kokoa ny vola amin'ny lavanty, dia tsy maintsy mandoa ny fahasamihafana ianao. Diniho ny fomba fiasa eo. Nanao sonia fifanarahana ...
Iza no orinasa manolotra kamiao semi-naverina?
aegis, mivoaka ny st. Louis mo. nampiasaina ho
Raha mahazo fiara 42 mpg ny fiara iray, hatraiza no mety hivezivezy ny lasantsy feno lasantsy 287 litatra?
tsara vintana mahita tanke izay mitazona 287 litatra nefa afaka 3172.1053 kilometatra amin'iny entona be io !!!!
Inona no mety ho olana manoloana ny haiko rehefa nihanaina sy nijanona aho androany?
indrindra fa ianao dia nitsoka ny lasantohan-doha na nanapoizina / nikapoka ny lohany ka tsy nisy fanakomotana tao anaty cylinders. mihazona ny entona mandrehitra ny atiny rehefa manandrana manomboka azy, mety mandeha mandritra ny segondra vitsy, saingy izao no fotoana hanaovana asa / fanoloana m...
Firy ny orinasa mpanamboatra fiara eto amin'izao tontolo izao?
Aostralia: · Tarrant Motor &amp; Engineering Co. · Holden UK · Mini · Tany Rover Brezila · Fiat · Volkswagen · Ford · GM · Nissan · Toyota · Mitsubishi · Mercedes-Benz · Renault · Troller · Marcopolo · SA · Agrale · Randon Alemaina · BMW · Opel · Audi · Porsche · Volkswagen · Bugatti · Lamborghi...
Inona no mety handrefesanao fiara?
Inci na sentimetatra. Ny fototry ny kodiarana, ny halavam-bolo, ny sakany, ny famindrana ny motera, ary ny elanelan'ny elanelam-pandrefesana hafa rehetra dia refesina amin'ny refy na santimetatra, miankina amin'ny toerana nanaovana azy. .
Inona ny fahasimbana mety hataon'ny herowin?
manjary mibontsina ho anao izy io, toa fiara mihodina anao
Mety hitera-doza ve ny lozam-pifamoivoizana?
tsia.ny raha lozam-pifamoivoizana iray
Firy ny kilaometatra mety hivezivezen'ny mpamily kamiao?
Ny mpamily kamiao antenaina dia tokony hivezivezy mandritra ny 2.000 ka hatramin'ny 3.000 kilaometatra isan-kerinandro, miankina amin'ny famerana ny adiny 70 ora amin'ny adiny valo andro. Ny mpamily izay vao manomboka dia afaka manantena hahita karama manomboka.
Mety mitera-doza ve ny menaka ambany?
Izany dia mahatonga ny motera ho mijanona ary maty. Na izany aza, manimba ny motera ny tenany amin'ny lozisialy, satria mety hiteraka fahavoazana amin'ny piston, lohany ary singa hafa izany. Matetika dia tsikaritra raha ambany ny hamainanao, fa ny menaka ambany dia mety miteraka ny maotera koa.
Tsy mety ve ny mametraka ny wd40 amin'ny hidim-baravarana?
"Na inona na inona," fikasana "rehetra" dia hanao io asa io, fa ho azonao antoka fa tsy hanatsotra ny hidim-baravaranao miaraka amin'ny grika grite fotsiny, satria hahavita manimba zavatra hafa noho ny tsara. Ampidiro tsotra ny mololo (izay omena matetika ny solika toy ny WD40) ao anaty cylinder ...
Hafiriana no mety hanidina fiara?
raha mbola tsy voakaly na nanasa sy miloko izy, tokony ho 5 y eo ho eo izao no miaraka amin'ilay crap a naoriny. ny taona taloha keliko dia toa ny andro nividiananay azy io, fa ny Ford 2004 dia efa natsofoka teo ambonin'ny lavadrano kodiarana izahay.
Ahoana no ahafahanao mamantatra raha manana tariby na tsy mety ny tariby?
Raha mainty sy mena ny tariby maro loko, ny tariby mainty no tariby ratsy, raha ny mena kosa no miabo. Raha mainty ny tariby roa fa misy mivadika fotsy kosa, ny tariby miorim-paka dia ratsy kosa, raha toa kosa ny tariby mainty tsotra.
Mety hanimba ny motera ve ny fidio rivotra mangatsiaka?
Ao an-dry sy ny tenany, ny CAI's dia tsy hiteraka fahavoazana amin'ny masin'ny fiara. Mihevitra ny olona sasany fa ny fisian'ny rivotra mangatsiaka amin'ny ankapobeny dia hanatsara ny fampandehanana ny motera, mamela ny solika hitombo amin'ny hafanana ambany kokoa, ary hampitombo ny fahombiazan'n...
Aiza no mety hahitananao fiara?
carmax amin'ny saika isaky ny mpivarotra fiara sy eny amin'ny arabe rehetra. mety mila ho craigslist.org bebe kokoa ianao no tranokala voalohany ampiasiko amin'ny fividianana efa nampiasaina na autobytel.com amin'ny iray vaovao.
Ho tahaka ny antifreeze ve ny fiaranao raha handeha ny lakan'ny rano?
Ny fiara ataonao dia tsy maimbo tahaka ny Antifreeze raha lasa ny fantson'ny rano anao, amin'ny zava-niainako manokana dia toa ny Voatifitra HEATER CORE io. Izany no mazàna manitra fofona toy izany, raha tsy hoe nandoka tamina motera ianao. Ary raha ny fantson'ny rano mandeha ny fiara dia hihazak...
Azonao atao ny manidy ny fiaranao raha tsy mametraka ny fanairana?
Eny, afaka manidy ny fiarantsika isika nefa tsy mametraka ny fanairana. Natsangana fotsiny i DWA rehefa voahidy ny fiara miaraka amin'ny lakile lavitra, na amin'ny alàlan'ny fanakonana ny fiara avy amin'ny cylinder (varavarana ivelany) ny varavaran'ny fiara.
Misy tsy mety ve ny mpanompo sampy?
izy ireo dia fiara tena haingana be indrindra indrindra fa ny Zonda F
Mety hamadika ny asman master master?
Tsia fa afaka miodina. Ny RTR dia miaraka amina esc iray izay hivezivezy avy eo aorian'izay dia miverina mamerina ny fotoana. Ity dia tsara amin'ny hazakazaka satria ny fahatarana dia saika hampidina ilay fiara avy ao amin'ny hafainganam-pandeha feno haingana hijanona alohan'ny hiverenan'ny five...
Misy fetrany ve ny fiara mety anananao?
Tsy misy fetra mazava ny isan'ny fiara afaka misoratra anarana amin'ny anaranao, fa misy fitsipika momba ny fiara firy afaka amidy amin'ny volana na herintaona. Miovaova arakaraka ny fanjakana ny fitsipika, fa amin'ny ankapobeny, raha mikasa ny hivarotra fiara mihoatra ny roa isan-taona ianao dia...
Hanimba ny fiaranao ve ny fiara rehefa mandeha ny jirom-pandrenonao?
tsy fanao raha mbola tsy mandeha ny fijanonan'ny fiara. matetika ny jiro tonga dia manondro fa mihazakazaka tsy mandeha amin'ny tsiranoka mivezivezy ianao
Inona ny fiara mety handry 5x120?
Ireo mpandray anjara amin'ity modely bolt ity dia mety hifanaraka amin'ireto fiara manaraka ireto: Acura (7) MDX NSX RL RLX TL TL SH-AWD ZDX. BMW (25) BMW Alpina (1) BYD (9) Bentley (1) Buick (5) Cadillac (7) Chevrolet (6)
Mety hipoaka ve ny fiara may?
Any ivelan'i Hollywood, fiara tsy mipoaka mihitsy. Indray may izy ireo, noho ny antony mazava: feno solika izy ireo. Raha simba ny tanky solika na ny tsenan-tsolika, dia afaka mifandray amin'ny motera mafana na loharanom-boankazo hafa ny lasantsy, ary mifangaro. Fa tsy mipoaka.
Mety mitahiry entona ve ny fantsona ratsy?
Mandrakotra ny fantsom-pandresena dia manarona ny motera fotsiny ny menaka. Raha mbola manana menaka ampy ianao, dia tsy olana. Ny haitao be dia be toa ny tsiranoka pinhole, na ny tapany radiatorika dia narafitra. Raha azonao atao dia misintona rehefa mafana ny andro ary ho hitanao raha mahita pa...
Mety ve ny manao dokambarotra amin'ny fiarao?
Tanàna maro no mifehy ny dokambarotra finday. Mety tsy ho afaka mametraka fiara ianao eny an-dalambe na ao amin'ny lalanao raha toa ka misy dokambarotra. Hamarino alohan'ny hahatongavanao. Vantany vao nanapa-kevitra ianao fa afaka mamoaka ara-dalàna amin'ny orinanao amin'ny fiara iray ny orinasan...
Mety ve ny motera-boatra manimba ny motera?
Raha tapaka ny rindrina elektrika na potika, dia azo inoana fa napetraka ny fantsom-pifandraisana tsy mety. Ny piraika spark izay lava loatra dia mety hiteraka fahavoazana be amin'ny motanao.
Mety hampihena ny heriny ve ny mpanova kataly miolakolaka?
Ny mpanova kataly iray efa voalamina dia mitotongana. Izany dia satria ny motera iray maniry sy mila miaina; raha mafy ny famerana dia tsy mety mandeha ny motera. Ity dia mety ho vokatry ny mpampita kataly miovaova.
Iza no orinasa mpanamboatra fiara lehibe indrindra eto an-tany?
Toyota ho ny ampahefany voalohany tamin'ny taona 2009, izay nanomboka ny Jona 2008.
Ratsy ve ny miala amin'ny fiaranao amin'ny fiara?
Ny tombontsoa lehibe amin'ny fandaozanao ny fiaranao amin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana dia ny fisorohana azy tsy hitsoaka. Midika izany fa, na dia tsy voatery ho ratsy foana aza ny fitazomana ny fiara ataonao rehefa eny an-tany lemaka ianao, dia ny zava-dehibe indrindra ny manao izany rehefa mi...
Ny hydroplanning dia mety hitranga amin'ny rano?
eny, manakatona ny afobe izany ankehitriny
Firy kilaometatra mety haharitra ny Kia Optima?
Tonga ny Kia Optima miaraka amina fahazoana voafetra mandritra ny dimy taona / 60000 kilaometatra ary misy garera misy powertrain 10000/100000 kilometatra. Ireo teny enti-miasa tsara kokoa noho ny azonao amin'ny ankamaroan'ny mpifaninana.
Mety ve ny mitondra fiara be loatra?
Tsy midika izany fa tsy afaka mitondra fiara be loatra ianao rehefa miakatra ny tanàna na ny tanàna mitondra fiara satria mety hihena ny fiara raha toa ka mety ho an'ny fiara mitondra fiara. Ny fotoana tokana dia mety ho tsara ny mitondra fiara miaraka amin'ny fanararaotana tafahoatra fa rehefa m...
Mety hitera-doza ve ny piraika maivana?
Paompy solika tsy mety na fotoana mety diso mety hiteraka an'io. Raha be loatra ny moto dia mety hahatonga azy ho kivy izany. Ny tena malaza amin'ny tondra-drano be loatra dia mandefa ireo fantsom-basy ary tsy azon'izy ireo atao ny mampifangaro ny solika ao anaty cylinder. Miteraka fahavoazana me...
Afaka manara-maso ny lalanao ve ny orinasa repo raha manana rafitra GPS navigate?
eny, ahoana ny fahaizanao fa mahita anao izy ary mitondra ny fiaranao
Hvordan kan jeg vite om momentomformeren min er dårlig?January 19, 2020
¿Cuál es la ubicación adecuada de un transportista de carga Sears Sport 20-SV?January 16, 2020
ما السيارات التي سلمت أول سيارة لها في عام 1900؟January 18, 2020
Les voitures rouges sont-elles plus chères à assurer?January 16, 2020
Lo necesito para la escuela ¿Cómo se llaman las grandes máquinas de barrido?January 18, 2020
Como você denuncia uma pessoa que esconde seu carro de um representante?January 17, 2020
Un enganx de 50 mm s’adaptarà a una bola de 2 polzades per al remolc?January 17, 2020
Driving with under-inflated tires can affect?January 18, 2020
Su ventilador de control de clima 528i 1998 no se apagará incluso con el motor del automóvil apagado ¿Cómo lo apaga?January 15, 2020
What's the difference between 125cc and 150cc?January 16, 2020
Ford FreestarHorsesComida rápidaBlu-ray PlayersGolden Gate BridgeJeep Grand Cherokee LaredoPuerto RicoWest IndiesThe Fast and the FuriousPerforming Arts
besoin de stocker 2 voitures dans une zone à température contrôlée - combien?
איך אתה מנעול את ההצתה שלך?
Postoje li penske kamioni različite veličine za iznajmljivanje?
How do I get rid of sign writing?
في السيارة الأوتوماتيكية إذا كانت ذراعك في وضع القيادة هل تحتاج إلى وضع قدم على الفرامل؟
살렌 자동차는 어떤 카테고리입니까?
Kan ik mijn voertuig on-online zetten?
Missões espanholas na Califórnia